Budada Nootropic Pramiracetam: faa'iidooyinka, qiyaasta, saameynta daawada
Budada Nootropic Pramiracetam: faa'iidooyinka, qiyaasta, saameynta daawada
/blog/Pramiracetam/Budada Nootropic Pramiracetam: faa'iidooyinka, qiyaasta, saameynta daawada
Posted on 05 / 02 / 2018 by 阿斯劳 ku qoray Pramiracetam.
1.Pramiracetam taariikhda budada
2.Pramiracetam magaca budada ah
3. pramiracetam alaabta ceeriin ah
4.Waa maxay shaqada budada ee Pramiracetam?
6.Pramiracetam qiyaasta daawada
7. Waxyeelooyinka budada ah ee budada ah ee Pramiracetam
8. Waayo-aragnimada isticmaalka budada ah ee Pramiracetam
9.Buy budada Pramiracetam online
I.Hawrka cagaarka ee Pramiracetam Calaamadaha aasaasiga ah:
1. Taariikhda budada ah ee Pramiracetam
Nootropic Budada Pramiracetam waa nooc ka mid ah derajada synthetic of piracetam, helay oo ay diyaarisay Parke-Davis ee 1970s. Waa dheellitir gaar ah, oo lagu qiyaaso inay ka timid 5-30x ka awood badan budhcad-badeeda.
Pramiracetam budhcad cayriin ah ayaa markasta la dhajiyay sida ugu dambeysa oo ugu weyn ee qoyska cunsuriga ah. Daawooyinka ugu khatarsan ee qoyska qoyska, Pramiracetam waxaa loo yaqaanaa in la hagaajiyo xasuusta xusuusta iyo awoodda wax barashada.Ka soo horjeeda qaar ka mid ah noocyada kale ee daroogada, daawooyinka caanka ah Pramiracetam Khudradda cayriin caanaha ah ayaa lagu tijaabiyay dadka waaweyn ee caafimaadka qaba halkii ay xoogga saari lahaayeen waayeelka kuwaas oo horeba u lumiyay awooddooda garashada. Gaar ahaan, budada cayriin ee Pramiracetam waxay ka caawisaa sidii loo xusuusto xasuusta muddada-dheer (hagaajinta xasuusta) ee tijaabooyinkan.
Budada cayriin ee Pramiracetam Pramiracetam ayaa laga helay Maraykanka oo ku yaal 1979, laakiin uma ogolaanin USFDA isticmaalka khaaska ah. Si kastaba ha noqotee, waxaa si weyn loo baaray sida daaweyn suurtagal ah oo ku saabsan dhibaatooyinka garashada iyo xusuus la'aanta la xiriirta cudurka Alzheimers iyo dhaawaca maskaxda. Waxaa sidoo kale lagu barayaa sida daaweyn loogu talagalay noocyada kala duwan ee nidaamyada habdhiska dareenka dhexe.
Waxaa laga yaabaa in ugu wanaagsan oo dhan, budada cayriin ee Pramiracetam waa wakiil neuroprotective. Budada Pramiracetam Raw waxay ka hortagi kartaa hoos u dhaca fahamka iyo luminta xusuusta ee daraasadaha lagu eegay dhaawacyada maskaxda. In kasta oo caddayn dheeraad ah looga baahan yahay arrintaan, qof kasta oo waayeel ah ayaa laga yaabaa inuu si dhow u fiirsado.
2. Magaca calaamadda budada ah ee Pramiracetam
Budada Nootropic Pramiracetam waxaa lagu iibiyaa Yurub hoos Magacyada sumadaha budada ah ee Pramiracetam Neupramir, Pramistar, iyo Remen waxaana loo qoraa daaweynta dysleksi, ADHD, jahawareer iyo dhibaatooyin xusuusta uu keeno cudurka Alzheimers iyo xaaladaha kale ee neerfaha.
pramiracetam alaabta ceeriin ah waa nooca budada, CAS Tirada waa 68497-62-1. alaabta ceeriin ee pramiracetam waa cadaan ama midab madow. Waa sahlan tahay in la iibsado budada budada ah ee Pramiracetam online (budada Pramiracetam ee iibka).
Riix halkan si aad u iibsato budada Pramiracetam online.
Magaca: Budada cayriin ee Pramiracetam
Miisaanka Molecular: 269.38
Dhibcaha Dhibcaha: 45.0-49.0 ° C
Kaydinta Kuleylka: Qaboojiyaha
Midab: Caddaan ama cad cad budada Crystalline
Xaqiiqada ah in budada cayriin ee Pramiracetam ay tahay baruur halkii ay ka dhalan lahayd biyaha, taasoo macnaheedu yahay in isku darka budada cayriin ee Pramiracetam biyo waa adag tahay. Halkii ay ka leexin lahaayeen, waxay si fudud u dabooli doontaa dusha sare. Qaar ka mid ah dadka isticmaala ayaa ka waramaya kala diridda qadarka budada ah ee Pramiracetam oo leh qadar yar oo saliid ah kaas oo sidoo kale kordhin kara nuugista iyo bioavailability.
Biyaha budada ee Pramiracetam waa: www.aasraw.com, budada Pramiracetam ee iibka
4. Sidee buu u shaqeeyaa budada Pramiracetam?
Budada Pramiracetam waxay leedahay awood badan Pramiracetam qaababka budada ah ee tallaabada(tusaale. Sidee ayuu u shaqeeyaa Pramiracetam). Budada cayriin ee Pramiracetam waxay kordhisaa awoodaha xusuusta muddada-dheer ee qofka waxayna u oggolaaneysaa aqoonta in si fudud loogu soo celiyo. Daroogadu waxay soo bandhigeysaa qaadashada qandhada sare, ama HACU, oo dhiirrigelisa soo saarista iyo sii deynta Acetylcholine ee Hippocampus ee maskaxda. Sida qaar badan oo ka mid ah qaybaha nootropic, astaamahooda awood siiya maskaxda ayaa lagu dabaqayaa dhowr xaaladood oo daran oo si xun u saameynaya xusuusta iyo shaqada maskaxda. Budada cayriin ee Pramiracetam waxay muujisay inay faa'iido u leedahay daaweynta cudurka Alzheimers, iyo sidoo kale, noocyada kale ee waallida dadka da'da ah. Daawada ayaa horeyba loo darsay sidii jawaab-celin daaweyn ah oo loogu talagalay dhaawacyada maskaxda. Ilaa hadda daraasaduhu waxay muujinayaan inay yihiin kuwo rajo leh.
Inta badan jilitaanku wuxuu u shaqeeyaa si toos ah u kicinta goobo gaar ah oo loo yaqaan 'neurotransmitter reseptors and thus increasing the production and releasing of neurotransmitters, laakiin budada cayriin Pramiracetam toos maaha isbeddel ku yimaada heerarka neurokimiga, mana u muuqato in uu leeyahay xanuunka' neurotransmitter '.
Iyadoo lagu dhiirri-galinayo kor u kaca foosto, budada Pramiracetam ayaa si aan toos ahayn u bedeleysa sii deynta asetylcholine iyo kicinaysa waxqabadka kordhay hippocampus. Sababtoo ah qeybtan maskaxdu waa mid muhiim u ah hawlgalka xasuusta, kicinta guud ee ah in budhcadda Pramiracetam ay abuurto horumarinta labadaba xusuusta cusub iyo xusuusinta tixraaca ama xusuusta mudada dheer. Hawlaha kor u kaca ee hippocampus ayaa sidoo kale kordhiya socodka dhiigga maskaxda, taas oo kor u qaadaysa feejignaanta iyo hagaajinta awoodda garashada guud.
Budada Pramiracetam waxay yeelan kartaa habab kale oo budo ah oo Pramiracetam ah oo wax qabad ah. Cilmi-baadhayaashu waxay muujiyeen in marka lagu daro saamaynta ay ku leedahay maskaxda, falalka budada ah ee Pramiracetam ee goobaha dhuumaha ka baxsan maskaxda ee ku tiirsan qanjirrada adrenal. Daraasaadka xayawaanku waxay soo jeedinayaan in budada cayriin ee Pramiracetam ay sidoo kale kor u qaadi karto ama soo celinayso dheecaanka xuubka maskaxda, taas oo sahlaysa unugyada unugyada.
5. Faa'iidooyinka budada ah ee Pramiracetam
Haddii aad waligaa ku jirtay shaqo ama xaalad shakhsiyeed halkaas oo aad ku lahayd ereyo, fikrado, ama jawaab ku saabsan caarada carrabkaaga, laakiin aadan xusuusan karin, ku soo dhawow jinsiyadda aadanaha. Dhamaan dadka oo dhan ayaa lahaa waayo-aragnimadani waxay iloobaan waxyaabo.
Sababtoo ah waxay badanaa abuurtaa dareen feejignaan la dareemi karo oo ay la socoto qaddar cayiman oo shucuur leh, waxaa badanaa lala barbar dhigaa Ritalin. Qaar ka mid ah waxtarrada budada Pramiracetam ee sida weyn loo aqoonsan yahay waa sida soo socota:
-Kulalka hormoonada hormarinta hagaajinta xasuusta
Sababtoo ah budada Pramiracetam waxay kicisaa hippocampus, qayb ka mid ah maskaxda ka mas'uulka ah abuurista xusuusta cusub, budada cayriin ee Pramiracetam waxaa loo yaqaana sidii kor u kaca xasuusto aad u xoog badan. Isticmaalayaasha intooda badani waxay soo sheegaan waxoogaa horumar ah oo ku saabsan sameynta xusuusta iyo xawaaraha qayba.
Daraasad tijaabo ah oo loogu talagalay 35 waayeelka waayeelka ah ee waayeelka ah ayaa xusuusiyay in kuwa qaata budada "Pramiracetam" ay soo bandhigeen xasuusto ka badan kuwii ka helay tababarka xusuusta, iyo sidoo kale kuwa aan helin midkood.
Daraasad (DB-PCT) oo afar dhallinyaro ah oo qaba dhaawaca maskaxda, budada "Pramiracetam" waxay soo hagaagtay xasuusta gaaban iyo muddada fog. Saameyntani waxay socotay muddo bil ah 1 ka dib markii daaweynta la joojiyey.
Toddoba toddobaad oo daaweyn ah budada cayriin ee Pramiracetam ayaa la ogaaday in ay kordhiso xusuusta mudada dheer iyo awoodda barashada jiirka.
Dufanka Pramiracetam wuxuu hagaajiyay xasuusta sheyga-aqoonsi ee jiirka
Isticmaalayaal badan ayaa sheegaya in qaadashada budada Pramiracetam ay ka caawiso in ay ku raaxaystaan ​​oo ay si buuxda uga qayb qaataan xaaladaha bulshada, faa'iido ay u badan tahay in la xidhiidha waxqabadka guud ee dheellitirka maskaxda, laakiin sidoo kale waxay noqon kartaa mid la xidhiidha saameyntiisa qulqulka ah, taasoo yarayn karta walaaca bulshada.
-Kulalka Dhiiga Dhiiga
Kani wuxuu kordhiyaa wareegga dhiigga ee maskaxda, taas oo keenta kororka oksijiinka iyo korodhka sonkorta. Isbeddeladaan waxaa loo maleynayaa in ay masuul ka yihiin kuwa kale ayeey kor u qaadeen feejignaanta, korodhka tamarta maskaxda iyo feejignaan fiican.
-Waxbarashada Dhibaatooyinka Maskaxda ee kala duwan
Cilmi baaris ayaa muujisay in budada cayriin ee Pramiracetam ay si weyn uga faa'iideysan karto bukaannada qaba xaaladaha maskax ahaan wax u dhimaya sida cudurka Alzheimers, jahawareerka iyo ADHD. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu daaweeyo dhaawacyada maskaxda.
-Helcelinta ka hortag iyo dib uga noqo Amnesia
Daraasad (DB-RCT) ee 24 oo ah mutadawiciin dhallinyaro ah oo waayeelka ah, macmacaan dufanka Pramiracetam ayaa qayb ahaan hoos u dhigay xusuus la'aanta ay keento makaanka barafowga, oo ah daroogada soo saarta amniga ku meel gaadhka ah.
Daraasad ay sameeyeen bukaanada 65 oo qaba dhaawacyo madax, budada cayriin ee Pramiracetam ayaa sidoo kale si fiican u shaqeysay si loo yareeyo saameynta amniga marka la barbardhigo burcad-badeeda.
Ka hortagida budada Pramiracetam waxay ka hortagtay xusuusta jilitaan ee jiirka oo lagu daaweeyo walax oo keena amnesia (hemicholinium-3).
Dufanka Pramiracetam wuxuu ka beddelay xasuusta xusuusta ee jiirarka ay keentay shoog koronto
-Waxbarashada Awoodda Waxbarashada
-Fiirsanaanta, Fiirinta iyo Dhiirigelinta
-Ka sarreeya heerarka tamarta
-Xasillinta xasaasiga ah iyo feejignaanta
6. Qiyaasta budada ah ee Pramiracetam
Inkasta oo budada Pramiracetam ay si fiican u dulqaadanayso xitaa qiyaasta sarreeya, falcelinta shaqsiyeed waa ay kala duwan tahay waxayna muhiim u tahay qof kasta oo isticmaala si uu u helo qiyaasta ugu wanaagsan ee u gaar ah si loo kordhiyo faa'iidooyinka budada ah ee Pramiracetam.
Sababtoo ah la'aanta daraasado cilmiyaysan oo ku filan, talooyin ku saabsan qiyaasta ugu habboon ee maalin walba aad ayay u kala duwan yihiin.
A Qiyaasta budada ah ee Pramiracetam inta u dhaxaysa 600 iyo 900 mg maalin dhan oo dheeraad ah ayaa ku filan si loo siiyo hal saameyn buuxda. Waa inaad si sahlan u qaadataa mgka 300 subaxdii iyo 300mg galabtii, hase yeeshee, tani waa wax aad ka hubiso shirkadda aad ka iibsaneysid budada cayriinka ah ee Pramiracetam, marwalba ku dheji taladooda! Badeecada budada ah ee Pramiracetam ayaa laga heli karaa qaabab kala duwan: Kaadabyo budo ah Pramiracetam ah, budada Pramiracetam rwa iyo kiniinnada budada Pramiracetam.
Inkastoo ay jiraan waxyaabo aad u yar oo saameyn ah budada budada ah ee Pramiracetam ee la xidhiidha lifaaqan, haddana marwalba waa mid caqli gal ah in la bilaabo qiyaasta dufanka budada ah ee Pramiracetam ee ugu hooseeya iyo kordhinta qaadashada si tartiib tartiib ah sida loo baahdo.
Mid ka mid ah waji la taaban karo oo lagu cuno budada budada ah ee Pramiracetam waa in uu leeyahay dhadhan aad u caan ah oo dadka intooda badani ay aad u xun yihiin. Isticmaalayaal badan ayaa doorbidaya inay iibsadaan kiniinno budada Pramiracetam ah ama iibsadaan budada cayriin Pramiracetam si ay u sameeyaan kiniinnada budada ah ee Pramiracetam.
In kasta oo budada Pramiracetam aan loo tixgelinin inay sun yihiin, waxaa jira dhowr qof oo yar Waxyeelooyinka budada ah ee budada ah ee Pramiracetam in laga yaabo inay isticmaalaan. Kuwaas waxaa ka mid ah:
Inta badan waxyeelada budada ah ee budada ah ee Pramiracetam waa mid khafiif ah waxaana si fudud loo xalin karaa loona daaweyn karaa.
-Waxaad ka heshay qaar ka mid ah budada cayriin ee Pramiracetam subaxdaan, dhadhankaygii koowaad ee nootropic ka baxsan 5-HTP. Waxay ahayd dharkii ugu xumaa ee aan dhadhamiyey, waxay dhadhanaysay qashinka sunta ah, laakiin waan jeclahay sababta oo ah waxaan ogaa in ay tahay wax xoogaa ah ... Maskaxdayda marnaba si fiican uma shaqeyn. Waxaan ahaa mid diiradda saaraya ... Waxay ahayd sida dareenka aad ka heshay markaad ku sugan tahay gobolkaas oo ah meel aanad wax qalad ah samayn karin oo aad kalsooni buuxda ka haysatid kulliyaddaada aadna tahay nasiib-nimada - nolosha xisbiga. Dhibaato la'aantu way jirtey. Fikradaha waxay ahaayeen kuwo cad "
-Faahfaahin, waan ku qanacsanahay, gaar ahaan koofiyadaha Pramiracetam cayriin. Waxaan maqlay in ay yihiin baruur-xumaayeen sidaa daraadeed waxaan bartay in aan qaato Kaadooyinka leh Cunnad Isku-Bariis ah oo la socda Omega-3 asiidh dufan ah. Inkastoo aan dareemayo kor uqaad taxadar leh, waxaan dareemayaa sidii aan rabo inaan wax badan wax ka qabto mar uun laakiin aanan u muuqan karin inay go'aamiyaan waxa la qabanayo. Waxaan ka shaqeynayay labo calaamado oo muhiim u ah mid ka mid ah duruusta taariikhda taariikhda ah ee dib u soo laabtay, waxaanan jecelahay in aan ka bilaabo qoraashadan fasal kale. Waxaan ka helaa budada cayriin ee Pramiracetam si aad u xoog badan, waxaanan doonayaa in aan eego helitaanka qadar yar si kor loogu qaado saameynta. "
- “wuxuu qaatay budada Pramiracetam maalintii inta lagu jiray fasallada, ka dibna wuxuu bilaabay inuu cabbo qiyaastii afar saacadood ka dib. Dulqaadkaygu wuxuu ahaa GONE, hoos ayaa loo dhigay xitaa. Kaliya hadal talo ah. ”
9. Ka iibso budada Pramiracetam khadka tooska ah
Dalalka qaar ee Bariga Yurub sida Latvia, Lithuania, Romania iyo Talyaaniga, ayaa laga iibiyaa budada budada ah ee Pramiracetam oo ah daawo rijeeto ah oo loogu talagalay daaweynta qaababka kala duwan ee garashada garashada.
Waxaa lagu suuq-gareeya magaca caanka ah "Pramistar" waxaana loo qaybiyey Menarini Group, oo ku yaal Naples, Talyaaniga.
Dalka Mareykanka, Kanada iyo Australia, budada cayriin ee Pramiracetam maaha mid lagu maamulo daawo rijeeto. Laguma liisgareynin maaddo la kontoroolo waxaana laga iibsan karaa internetka.
Si kastaba ha noqotee, daroogada suugaantani ma aha mid u qalma iyada oo lagu qeexayo qaddarka nafaqada oo aan si sharci ah loogu iibin karin foomka dheeraadka ah ee isticmaalka dadka. Waxaa sida caadiga ah lagu iibiyaa qaab budada ah.
Boqortooyada Ingiriiska iyo qaar ka mid ah waddamada kale, budada cayriin ee Pramiracetam ayaa loo xakameynayaa sida daroogada dhakhtar qoro, inkastoo aan loo adeegsanin daawada. Under sharciga UK, waxaa laga iibsan karaa internetka iyo laga keeno isticmaalka shakhsi iyada oo aan rigoore.
Su'aal aan ku waydiinno wax badan ayaa ah; Halkee baan ka heli karaa? iibso budada Pramiracetam? Waa hagaag, dad badan ayaa ka iibsan doona budada cayriin ee Pramiracetam khadka tooska ah ee shabakadda www.aaraw.com, tani waa goob runtii xirfad leh oo tayada guud ay aad u wanaagsan tahay isla markaana rarku si dhakhso leh u socdo. On site AASraw, waxay yiraahdaan had iyo jeer waxay ku rartaan 12 saacadood gudahood ka dib iibsiga illaa ay tahay fasax qaran ama axad. Waqtiga parcelarrive waa mid kaladuwan sida ku cad cinwaanka aad heleyso. Xaqiiqdii waxaan dhihi lahaa www.aasraw.com waa meesha ugu fiican ee laga iibsado budada cayriin ee Pramiracetam khadka tooska ah!
Waa maxay methenolone enanthate budada?
Tags: iibso budada Pramiracetam, Budada Pramiracetam
Drug Adultinil Poul Drug: Maxaad Ka Ogeysaa?	Ku iibso Drug Sponge Sunifiram online